MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: Which is Better For Your Career & လစာ? [2018 Update ကို]
တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ
ထိပ်တန်း7Best CPA Courses
Yaeger တကြ် CPA
အစာရှောင်ခြင်း Forward အကယ်ဒမီ
Roger VS. Becker က
Wiley VS. Becker က
Surgent VS. Becker က
တကြ် CPA စမ်းသပ်ဘဏ်
တကြ် CPA လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
တကြ် CPA စာမေးပွဲလိုအပ်ချက်များ
MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: ဘယ်တစ်ခုမှာသင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးသည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည် & လစာ?
23 သြဂုတ် MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: ဘယ်တစ်ခုမှာသင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးသည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည် & လစာ?
Posted at 22:50h တွင် Accounting Careers, Main Blogroll အားဖြင့် Bryce Welker, တကြ် CPA0မှတ်ချက်များ
Updated:အောက်တိုဘာလ 23, 2018
Bryce Welker, တကြ် CPA
သူတို့ရဲ့အဘို့အသွားအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းသည့်အခါကောလိပ်ကျောင်းသားများကမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှုပ်ထွေးရှာတွေ့ တကြ် CPA လိုင်စင် သို့မဟုတ် MBA ဘွဲ့ဒီဂရီဝင်ငွေ. မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုရှာတွေ့ဖို့အတွက်သော့ချက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များနှင့်သင့်တဦးချင်းဦးစားပေးအနေနဲ့အကဲဖြတ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီအစားအကြံဉာဏ်ကိုအခြားသူများမှတက်ရှာနေ၏, သင်အချိန်ယူနှင့်သင့်အနာဂတ်အစီအစဉ်များကိုစဉ်းစားကြောင်းပိုကောင်းတယ်က. သင်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီရန်, သငျသညျအနားယူသာသင့်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်တစ်ဦးချင်းစီ၏အခြေခံကိုကြည့်မယ့်ပါစေ.
တကြ် CPA ကဘာလဲ?
တစ်ဦးက MBA ဆိုတာဘာလဲ?
MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: အလုပ်ရှာဖွေရေး Path ကို
MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: လစာ
MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်
MBA ဘွဲ့ရ vs တကြ် CPA: အချိန်လိုအပ်ချက်များ
ဒါကြောင့်, ဘယ်တစ်ခုမှာသင်ဟာအဘို့ သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်?
တစ်ဦးကလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (တကြ် CPA) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအမေရိကန်အင်စတီကျုအားဖြင့်ချီးမြှင့်မယ့်ဘဏ္ဍာရေးအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါသည် (AICPA). ဤသည်မှာလက်မှတ်ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၌ကြီးသောအောင်မြင်မှု၏အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု. သငျသညျလိုပါက တကြ် CPA ဖြစ်လာ, သင် AICPA အားဖြင့်ကောက်ယူကြောင်းတစ်ခုစာမေးပွဲရမယ်. အဆိုပါတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စာရင်းကိုင်၏အဓိကသဘောတရားထဲမှာသင်ပြင်ဆင်နှင့်သင့်နားလည်မှုနှင့်စာရင်းစစ်များနှင့်စာရင်းကိုင်၏လယ်ပြင်သို့ဤသင်ယူမှုလျှောက်ထားရန်စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်. တစ်ဦးကတကြ် CPA အခွန်ဥပဒမေးခွန်းများကိုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်စဉ်းစားသို့မဟုတ်လူတွေကိုအခွန်အကွံဉာဏျပေးနေပါသည်. သငျသညျသေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတခုတွင်သို့မဟုတ်တောင်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အလုပ်အခွင့်အလမ်းများပွင့်လင်းရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်.
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးကမာစတာပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်အဘို့အသငျသညျပွငျဆငျဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောလိပ်များကကမ်းလှမ်းတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဒီဂရီသင်တန်းဖြစ်ပါသည်. MBA ဘွဲ့အားလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍသို့ generalized လေ့လာမှုသည်နှင့်သင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးနယ်ပယ်ထွင်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးသင့်တော်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး. ကျောင်းသားများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အထူးပြုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အရေးပါမှုကိုသူတို့ရဲ့ဧရိယာပေါ် မူတည်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း-အချိန်နှင့်အကွာအဝေးသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုမှတဆင့်ဒီဂရီသင်တန်းလိုက်ရှာဖို့ပွင့်လင်းကြသည်. The different areas of specialization that you can achieve under the umbrella of an MBA program are accounting, ဘဏ္ဍာရေး, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်, နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ (စီမံခန့်ခွဲမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူစပ်လျဉ်း). အဆိုပါ MBA ဘွဲ့ရများ၏လေ့လာမှုအစီအစဉ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်ဘောဂဗေဒနဲ့တူဘာသာရပ်များကပါဝင်ပတ်သက်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စည်းရုံးရေးအပြုအမူနှင့်အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
တကြ် CPA အဖြစ်, သင့်ရဲ့အလုပ်ခေါင်းစဉ်တို့ပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ,: CFO, စာရင်းစစ်, အခွန်အကြံပေးသို့မဟုတ်မှုခင်းစာရင်းကိုင်. MBA ဘွဲ့များအတွက်လေ့လာမှုများ၏ဒေသများတွင်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်-အထိနေကြသည်ကတည်းက, ပိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်. သငျသညျတကြ် CPA လိုင်စင်ရှိပါက, သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများစာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအတွက်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မည်. သင်သည်ထိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးရခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာကမ္ဘာကြီးကိုရှိသည်လိမ့်မယ်.
သငျသညျ MBA ဘွဲ့ရှိပါက, သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောရွေးချယ်မှုများ, depending on your area of specialization. သငျသညျ MBA ဘွဲ့ရှိပါက, သင်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်, သတင်းအချက်အလက်အရာရှိချုပ်, စစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်.
ဒါဟာ MBA ဘွဲ့သို့မဟုတ်တကြ် CPA ရှိခြင်းထက်ပိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတံခါးများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေအလားအလာတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမကြီးမြတ်လျှို့ဝှက်ချက်င်. အတွေ့အကြုံနှင့်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့အလုပ်မလုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအချို့သက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်. သငျသညျတကြ် CPA ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရရှိမည် 10% သင့်ရဲ့ Non-တကြ် CPA များထက်ပိုပြီး. တကြ် CPA များအတွက်ပျမ်းမျှလစာဖြစ်ပါသည် $62,123 တစ်နှစ်လျှင်. သို့သော်ငြားလည်း, တည်နေရာတစ်ဦးက MBA များအတွက်လျော်ကြေးငွေအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍ - ကျောင်းသင်တက်ရောက်ခဲ့သည်အဓိပ္ပာယ် (အမျိုးသားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီး) သငျသညျလုပ်မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, သင့်ရဲ့ MBA ဘွဲ့ရဝင်ငွေပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်, သငျသညျ၏ပျမ်းမျှအပေါ်အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် $50,427. ကြောင်းအတွင်းထင်ရစေခြင်းငှါနေစဉ်, သင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဖို့အဖြစ်သင့်ဝင်ငွေအလားအလာသိသိသာသာတိုးမြှင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဆိုတာကိုသတိရ. ပျမ်းမျှတွင်, သငျသညျ MBA ဘွဲ့ရှိပါက, သင်ဤအထောက်အထားများမရှိဘဲသင်၏ရွယ်တူထက်ပိုမိုသာရှိပြီးတိုးပြီးနှင့်တိုးမြျှောလငျ့နိုငျ.
တကြ် CPA ဖြစ်လာအပေါ်စျေးနှုန်း၎င်း tag ထားရန်ခက်ခဲသည်. သင်သည်သင်၏ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရဖို့ရှိရာကျောင်းတွင်အဆိုပါကျူရှင်ညီမျှခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်. ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, သင်ယူစေခြင်းငှါ, မဆို prep သင်တန်းများနှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်ထို CPA စာမေးပွဲတွင်အဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. သင်ဤအကြောင်းကိုကုန်ကျမည်တွက်ဆနိုင်ပါတယ် $2,000. စာမေးပွဲဖြေဆိုကိုယ်တိုင်ကနှင့်စပ်လျဉ်း, ကုန်ကျစရိတ်ပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှစှာအတက်အကျ. တချို့ကပြည်နယ်များမည်မျှအပိုင်းအားဖြင့်ပြိုပျက်သောမှတ်ပုံတင်ကြေးများ(s ကို) သင်တို့အဘို့ထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားစာမေးပွဲ၏. ပြန်လုပ်ရန်များအတွက်အပိုဆောင်းကြေးရှိပါတယ်. (သငျသညျစာရင်းကိုင်သင့်ရဲ့ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။) ပျှမ်းမျှတွင်, အဲဒီအကြောင်းကုန်ကျမည် $1,500 လေးယောက်စလုံးကဏ္ဍများဘို့ထိုင်ဖို့. နောက်ဆုံး, လိုင်စင်သူ့ဟာသူ၏ကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိ, အရာတွေအကြောင်းပျမ်းမျှ $150. နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မေ့မနေပါနဲ့, သင်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်တံ့သောအဘို့ကိုပုံမှန် CPE သင်တန်းများတက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. တချို့ပြည်နယ်များတွင်, ကော်နက်တီနဲ့တူ, တောင်းဆို 40 CPE နာရီနှစ်စဉ်. ဒါကသလောက်ကုန်ကျနိုင် $4,000 နှစ်စဉ်ပညာရေးဆက်လက်အတွက်. MBA ဘွဲ့ဝင်ငွေများ၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မား variable ကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်တူသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်: ပထဝီတည်နေရာ, အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းသာရှိပြီးပြည်ပမှပုဂ္ဂလိက, လိုအပ်သောနာရီအရေအတွက်က, စသည်တို့ကို. ထိုကဲ့သို့သောစာအုပ်တွေနှင့် / သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပစ္စည်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကဲ့သို့သောအခြားကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပုံ, နည်းပညာကုန်ကျစရိတ်, လေ့လာမှုသင်တန်းများနှင့်သင် On-ကျောင်းဝင်းအသက်ရှင်ဖို့စီစဉ်ထားပါလျှင်, အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့၏ကုန်ကျစရိတ်. ကျူရှင်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် $58,000. သငျသညျအခြိနျပွညျ့ကြောငျးသားဖြစ်လာဖို့ရှေးခယျြပါလျှင်အခြားအထည့်သွင်းစဉ်းစားသင်ကအထက်ပါလိမ့်မည်ဟုဝင်ငွေနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်. ဒါကဘာကြောင့်အခြိနျပိုငျးဖြစ်ပါသည်, အွန်လိုင်းနှင့်, အရှိန်က MBA ပရိုဂရမ်များဒါလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီ.
တကြ် CPA ရှည်ကြာဖြစ်လာပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျပြီးစီးခဲ့ပါပြီရမယ် 150 ဘွဲ့ကြိုအကြွေးနာရီနှင့်သင်တို့သည်လည်းနာရီပေးထားသောအရေအတွက်ကိုတကြ် CPA ၏တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်အချို့ပြည်နယ်များလိုအပ်ချက်. သင်တို့သည်လည်းရှိပါလိမ့်မယ် 18 ထိုင်ခြင်းနှင့်သွားလအတွင်း ထို CPA စာမေးပွဲတွင်၏လေးယောက်လုံးအစိတ်အပိုင်းများ. စုစုပေါင်းကအကြောင်းယူနိုင်ခဲ့ 8 1/2 တကြ် CPA ဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း (e.g. ဘွဲ့ကြိုအလုပ်၏ငါးနှစ်အတွင်း, အလုပ်အပေါ်နှစ်နှစ်နှင့် 18 လတကြ် CPA စာမေးပွဲဖြစ်သည်။) MBA ဘွဲ့ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြည့်စွက်စရာတိကျတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားရှိပါတယ်. သငျသညျအပြည့်အဝသို့မဟုတ်အခြိနျပိုငျးလေ့လာလျှင်နှငျ့သငျကျောင်းဝင်းအပေါ်အတန်းတက်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းသူတို့ကိုယူလျှင်အဘယ်မျှလောက်ကြာကြာပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်. တချို့ကကျောင်းများတွင်လည်းဒီဂရီပြီးစီးများအတွက်လိုအပ်သောနာရီအချို့ချွတ်ခေါက်နိုင်သည့်အလုပ်အတွေ့အကြုံအတွက်အကြွေးပေး. MBA ဘွဲ့အစီအစဉ်ကိုမာစတာဘွဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက, သငျသညျပြီးစီးအပေါ်သို့ရှောက်သွားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအောင်လက်မှတ်စာမေးပွဲမရှိအမျိုးအစားလည်းမရှိ. သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အစီအစဉ်မှဘွဲ့ရ. ပျှမ်းမျှတွင်, ကြာသည် 2-3 MBA ဘွဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ဖို့နှစ်ပေါင်း.
သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်းများသို့မဟုတ်ယေဘုယျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ထို့နောက် MBA ဘွဲ့ပိုကောင်းရွေးချယ်မှုပါလိမ့်မယ်. သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျတင်းကြပ်စွာတစ်ဦး "နံပါတ်များကို cruncher လျှင်,"သင်တကြ် CPA ဖြစ်လာသင့်တယ်, သင်တစ်ဦးကြီးတွေလေးစာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီတခုအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်အထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေး၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရဖို့နှင့်ပိုပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လာရန်လိုလားသူတစ်ဦးတကြ် CPA ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, MBA ဘွဲ့ရတဲ့အသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်. ထိုနည်းတူ, သငျသညျဘဏ္ဍာရေးအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ MBA ဘွဲ့ရရှိရန်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်အခွန်ကောက်ခံမှုအတွက်အထူးပြုဖို့စီစဉ်ထားပါလျှင်, အဲဒါကိုသွားစုံလင်သောသဘာဝကျပါတယ် တကြ် CPA ဖြစ်လာ. တကြ် CPA ရက်သတ်မှတ်နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ MBA ဘွဲ့ရရန်မဖြေရှင်းနည်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးရှိခြင်း၏အကောင်းအဆိုး cons ကိုဖော်ပြရန်ကြောင်းသုတေသနတစ်ခုပြည့်စုံစေ့စပ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်. MBA ဘွဲ့ရရှိသည်သောလူများကွန်ယက်နှင့်စကားပြော, တကြ် CPA သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်သူတို့ပူဇော်သောအရာကိုအကွံဉာဏျကိုတွေ့မြင်. သင်အဘို့အကောင်းဆုံးဘာဆုံးဖြတ်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်အကျိုးစီးပွားယူရှိသည်, ကျွမ်းကျင်မှု, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်ရွယ်ချက်များ.
အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ 2018
ထိပ်တန်း 50 Accounting Blogs
ထိပ်တန်း 11 Audit CPA Exam Tips
အဆင်သင့်. Set. Crush It.
တကြ် CPA စာမေးပွဲကဏ္ဍများ
တကြ် CPA လိုအပ်ချက်များ
တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ်နှိုင်းယှဉ်
အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ 2018 464 comments
သင်၏အတကြ် CPA စာမေးပွဲလေ့လာအချိန်အားဖြင့်လျှော့ချပေး 116 hours! 232 comments
အဆိုပါတကြ် CPA စာမေးပွဲ၏ပုဒ်မငါပထမဦးစွာကိုယူသင့်သဘယ်ဟာ? 203 comments
တကြ် CPA စာမေးပွဲလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ် 127 comments
ခြုံငုံသည် RATING: ★★★★★
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $700 သွား on this stellar review course with this Roger CPA Premier promo code. မိမိအပါဝငျပို့ချချက်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဒီသင်တန်းကိုနှစ်ပေါင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအဓိကဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကရော်ဂျာတကြ် CPA လျှော့စျေးကုဒ်မှလျော့နည်းကျေးဇူးတင်စကားအားလုံးကိုဥစ္စာင်. ထိုအငွေစုနှင့်အတူ, ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှမရှိဘူးင်, ဒါရော်ဂျာတကြ် CPA ကူပွန်ကိုသုံးပါနှင့်ယနေ့လေ့လာနေရ.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 26 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 26, 2018
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 8 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 24, 2018
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, သီးသန့်လျှော့ 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $367.50 နှင့် our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course
နောက်ဆုံးအသုံးပြု3လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
October Sale! ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $800 ကျနော်တို့ Surgent တကြ် CPA ပထမဦးစွာ Pass ကို. Hurry offer ends soon!
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
October Sale! ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $800 OFF Surgent CPA Premier Pass. There’s no better time than right now to get on track to earn your CPA.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု2လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 31, 2018
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ $700 သွား, making Roger CPA’s Elite course the same price as their Premier course! Act fast this offer won’t come around again anytime soon. အပြည့်အဝအသေးစိတျနဲ့ကန့်သတ်ဘို့ရော်ဂျာတကြ် CPA ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုပါ.
ကူပွန် code ကို GET
ကိုကာကွယ်ဖို့ $500! Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပရီးမီးယားလိဂ်လျှော့
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
Crush ရဲ့သီးသန့်အသုံးပြုပါ $500 Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်သင်တန်းအမှတ်စဥ်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရန် Surgent တကြ် CPA ကူပွန်ကုဒ်. ဒီ Surgent လျှော့စျေးကုဒ်တွေနဲ့ပိုက်ဆံ Save နှင့်ယခုလေ့လာနေအပေါ်စတင်ရန်. သင့်ရဲ့ Surgent ကူပွန်ကုဒ်ယခုတောင်းဆိုယနေ့သင်၏အတကြ် CPA ခရီးကိုစတင်!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 14 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $310 – Fast Forward Academy CPA Discount
ခြုံငုံသည် RATING: ★★★★ ★
တကြ် CPA, သီးသန့်လျှော့, အစာရှောင်ခြင်း Forward အကယ်ဒမီ 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $310 off the Fast Forward Academy CPA Smart Bundle course this Fall! Use this discount link to save BIG and start your CPA journey today!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 10 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 29, 2018
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $150 on the Crush Test Bank!
တကြ် CPA, အထူးကမ်းလှမ်းချက်, အဆိုပါတကြ် CPA နှိပ်စက် 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $150 off your 1st purchase of the Crush Test Bank!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု7စက္ကန့်အကြာက
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 25, 2018
ကိုကာကွယ်ဖို့ 20% – ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – audio သင်တန်းအမှတ်စဥ်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 20% သွား ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအသံသင်တန်းအမှတ်စဥ်ဒီသီးသန့် Crush အဆိုပါတကြ် CPA ကူပွန်ကုဒ်တွေနဲ့ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်. အပြည့်အဝအသေးစိတျနဲ့ကန့်သတ်ဘို့ရော်ဂျာတကြ် CPA ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုပါ.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 13 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
ကိုကာကွယ်ဖို့ 20% – ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – လတ်ဆတ်တဲ့ Start ကိုအထူး
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 20% သွား offaone-time purchase of Roger CPA Review Courses & ကုန်ပစ္စည်း. အပြည့်အဝအသေးစိတျနဲ့ကန့်သတ်ဘို့ရော်ဂျာတကြ် CPA ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုပါ.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 1 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
ကိုကာကွယ်ဖို့ 20% – ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – CRAM သင်တန်းအမှတ်စဥ်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 20% သွား ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း CRAM သင်တန်းအမှတ်စဥ်ဒီသီးသန့် Crush အဆိုပါတကြ် CPA ကူပွန်ကုဒ်တွေနဲ့ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်. အပြည့်အဝအသေးစိတျနဲ့ကန့်သတ်ဘို့ရော်ဂျာတကြ် CPA ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုပါ.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 29 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
ကိုကာကွယ်ဖို့ $145 Yaeger တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်
တကြ် CPA, Yaeger တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $145 off 4-part all-access full Yaeger CPA review courses. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $40 off single-part all-access CPA courses. Yaeger CPA isahigh-quality, trusted source for CPA review material. Take advantage of these savings because they don’t last long.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 24 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
Gryfin တကြ် CPA CRAM သင်တန်းအမှတ်စဥ်လျှော့
တကြ် CPA, Gryfina, သီးသန့်လျှော့ 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ရယူ 15% သွား the Gryfin CPA Cram Course with our great discount code. သငျသညျအသီးအသီးတကြ် CPA စာမေးပွဲတွင်အပိုင်းတချို့အပိုလေ့လာမှုပစ္စည်းများရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျရှောကျသှားသေချာအောင်ဖို့ Gryfin တကြ် CPA CRAM သင်တန်းအမှတ်စဥ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်!
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 27, 2018
Gleim CPA Premium Review Course Discount – ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $200 သို့မဟုတ် 10%
တကြ် CPA, Gleim တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $200 with our Gleim CPA Premium Course discount and get an awesome deal onaproven course. You’ll have more money for exam fees and anything you need to help you get through the studying process when you use our Gleim discount link. ယခု Buy ယနေ့စတင်ရန်!
Wiley ရွှေ CPAexcel လျှော့ Code ကို
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, သီးသန့်လျှော့ 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $277.50 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Gold CPAexcel course. ရွှေတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းဘို့ငါတို့ Wiley အထူးနှုန်းများ code ကိုကျေးဇူးတင်ယနေ့တို့သည်ကြီးစွာသောသင်တန်းအပေါ်ပိုက်ဆံ Save.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 36 စက္ကန့်အကြာက
တကြ် CPA စာမေးပွဲမေးခွန်းလွှာတယ်? အဖြေများ get!
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, Webinar 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
လူအပေါင်းတို့သည်တကြ် CPA စာမေးပွဲတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့ Surgent ရဲ့တိုက်ရိုက် webinar စီးရီးကို Join:
2018 တကြ် CPA စာမေးပွဲအပြောင်းအလဲများ
တစ်ဦးသုတေသနခြင်း simulation မေးခွန်းဖြေရှင်းဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ BEC ရေးသားဆက်သွယ်ရေးမေးခွန်းများတွင်အများစုမှာအမှတ် Get
ရော်ဂျာတကြ် CPA ဘဏ္ဍာရေးကမ်းလှမ်းချက်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကိုယ့်အဘို့ $183 တစ်လ, သင်တစ်ဦးတတ်နိုင်ငွေကြေးအစီအစဉ်နှင့်အတူရော်ဂျာတကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းရနိုင်. Don’t hesitate—start studying for the CPA exam now thanks to this great Roger CPA financing deal.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 25 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
မှားယွင်းသောတကြ် CPA 0% ငွေကြေး
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ဤကျေးဇူးတင်ပါသည် မမှန်သော 0% ငွေကြေးစာချုပ်, သင်တစ်ဦးအကြီးအတကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းနှင့်အတူအချို့သောအကူအညီနဲ့ရနိုင် . ဘို့ ရုံ $49, သငျသညျယနေ့လေ့လာနေစတင်နိုင်ပါသည်. ဒီ Surgent ငွေကြေးကမ်းလှမ်းမှုမှကျေးဇူးတင်စကား. ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထား-သင့်ရဲ့မနေပါနဲ့တကြ် CPA ခရီးစောင့်ကြို!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 53 စက္ကန့်အကြာက
Surgent တကြ် CPA 5-Day ကိုအခမဲ့အစမ်းကမ်းလှမ်းချက်
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အခမဲ့စမ်းသပ် 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
လူအပေါင်းတို့သည်ဖောင်းပွကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့နှင့်ပတ်သက်သောအရာကိုကြည့်ရှုပါ. စမ်းသပ်မှုပထမဦးဆုံးအဘို့ Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းကိုမောင်း5လုံးဝအခမဲ့ရက်ပေါင်း. မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ယနေ့စတင်ရန်!
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အခြား 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ရယူ အထိ $800 & 30% သွား ဤကြီးစွာသောရော်ဂျာတကြ် CPA ကူပွန် codes တွေကိုနှင့်အတူယနေ့လျော့နည်းများအတွက်လေ့လာနေစတင်ရန်! သင်ကရော်ဂျာတကြ် CPA တရားဝင်ပရိုမိုကုဒ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောလတ်ဆတ် Start ကိုအဖြစ်, ခိုင်မာသော, ကြောငျးသား, and Newsletter discounts.
SHOW WEEKLY အထူးနှုန်းများ
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 34 စက္ကန့်အကြာက
Wiley CPAexcel အပတ်စဉ်အထူးလျှော့စျေး
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, အခြား 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ရယူ အထိ $500 သွား ဒီသင်တန်းအပေါ် Wiley တကြ် CPA ကူပွန် codes တွေကိုကျေးဇူးတင် Crush မှာသီးသန့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်. တစ်ပတ် Wiley CPAexcel ရဲ့ Flashsale ဒီနေ့သင်လေ့လာနေစတင်ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. သူတို့မဆိုအထူးလျှော့စျေးအပြေးနေကြလျှင်ကြည့်ဖို့ Wiley ရဲ့ site ကိုထုတ်စစ်ဆေး!
Wiley ငွေ CPAexcel လျှော့ Code ကို
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, သီးသန့်လျှော့ 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $255.00 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Silver CPAexcel course. အဆိုပါငွေတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းဘို့ငါတို့ Wiley အထူးနှုန်းများ code ကိုကျေးဇူးတင်ယနေ့တို့သည်ကြီးစွာသောသင်တန်းအပေါ်ပိုက်ဆံ Save.
အဆိုပါ get4ငါစေရန်အသုံးပြုအရင်းအမြစ်များ ထို CPA စာမေးပွဲမှဖြတ်သွား အကြှနျုပျ၏တွင်
(သဲလွန်စ:2သူတို့ထဲကအခမဲ့များမှာ)
သင့်အီးမေးလ်ငါနှင့်အတူအလုံခြုံ. ငါအရမ်း spam များကိုမုန်း!
ကြီးမားသော4စာရင်းကိုင်လမ်းတံတားလစာပြိုကွဲရ
တကြ် CPA စာမေးပွဲလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်
အကောင်းဆုံး 2018 တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းလျှော့စျေး & အထူးနှုန်းများကုဒ်များ